काकेगुरुई सिजन ३, रिलिज मिति, कहाँ हेर्ने + थप - क्र्याडल दृश्य
के त्यहाँ काकेगुरुई सिजन3हुनेछ?
by Dima 29th नोभेम्बर 2021 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड Kakegurui सिजन ३ मा, रिलिज मिति, कहाँ हेर्ने + थप
केकगुरुई एक नाटकीय काल्पनिक एनिमे हो जुन 2017 मा बाहिर आयो। एनिमे राम्रोसँग प्राप्त भएको थियो जब यो बाहिर आयो र2मा एक सिजन 2019 रिलिज भयो। दोस्रो सिजनले धेरै ध्यान प्राप्त गर्यो किनभने यो शृङ्खलाका निश्चित क्यारेक्टरहरूमा थप विस्तार भयो। यी समावेश थिए युमेको जबामी, मेरी सोटोम, रयोटा सुजुई। यस लेखमा, हामी Kakegurui सिजन3को ठूलो सम्भावनाको बारेमा जान्छौं, किन यो धेरै सम्भावना छ र निश्चित रूपमा यो प्रिमियर हुनेछ।
अनुमानित पढ्ने समय:7मिनेट
अवलोकन - काकेगुरुई सिजन ३
काकेगुरुई भनेको स्कूलको बारेमा हो Hyakkaou निजी एकेडेमी, जुन कुनै पनि सामान्य प्रकारको विद्यालय मात्र होइन। यो विद्यालय जुवामा संलग्न छ र यसलाई सक्रिय रूपमा प्रोत्साहित गरिएको छ। एकेडेमीमा, जुवालाई मनोरञ्जन गतिविधिको सट्टा मुद्राको रूपमा बढी हेरिन्छ। विद्यार्थीहरूले यसलाई धेरै चीजहरूको लागि प्रयोग गर्छन्, जस्तै: सट्टेबाजी, खेल खेल्न र अरूमाथि शक्ति प्राप्त गर्न।
यद्यपि, यदि तपाईंले धेरै हरानुभयो भने, तपाईं घरपालुवा जनावरको रूपमा समाप्त हुनुहुनेछ। घरपालुवा जनावरहरू एकेडेमीमा रैंकिंग संरचनामा सबैभन्दा कम छन्। यो संरचना, पक्कै पनि, पदानुक्रममा आधारित छ, धेरै जसो वास्तविक संसारका संरचनाहरू जस्तै।
पात्रहरू - काकेगुरुई सिजन ३
काकेगुरुईमा धेरै पात्रहरू छन्। यी अवश्य पनि समावेश छन् युमेको जबामी, मेरी सोटोम, रयोटा सुजुई, अन्य वर्णहरू पनि समावेश छन्: मिडारी इकिशिमा, सायाका इगाराशी, किरारी मोमोबामी र अरु धेरै। तल मुख्य पात्रहरू छन्।
युमेको जबामी मुख्य पात्र हुन् केकगुरुई र धेरै आँखा कैचर पनि छ। युमेको एनिमीमा तुरुन्तै साइड क्यारेक्टरको साथ जुवा खेल्न सुरु हुन्छ मेरी सोटोम, उसलाई धेरै सम्मानजनक र विनम्र तरीकाले पिट्दै, धेरै Saotome को मन नपर्ने युमेको हामी पक्कै पनि देखा पर्छौं केकगुरुई सिजन 3. यस एनिममा, युमेको धेरै चालाक तर जुवाको सम्बन्धमा उनको व्यवहारमा सम्मानजनक छ। उनी स्मग वा मन नपर्ने होइन र सबै भन्दा माथि, धेरै निष्पक्ष र इमानदार छिन्।
साओटोमले मेरीलाई कुटपिट गरिसकेपछि, उनी उनको साथी बन्छिन्, र शृंखला अघि बढ्दै जाँदा एक अर्काको नजिक पनि टाँसिन्छिन्। Saotome विपरित तरिकामा श्रृंखला बन्द सुरु हुन्छ युमेको, धेरै मुस्किल र विनम्र हुनु। Saotome सम्भवतः Kakegurui सिजन3मा देखा पर्नेछ। युमेको एक शुरुआती हो र उनी के गरिरहेकी छिन् भन्ने थाहा छैन भनी उनी मान्छन्। दुर्भाग्यवश, उनले यो कठिन तरिका असत्य हो भनेर पत्ता लगाइन्।
अन्तमा हामीसँग Ryota Suzui छ, एक विद्यार्थी जसले शृङ्खलामा घरपालुवा जनावरको रूपमा सुरु गर्छ र युमेकोलाई मद्दत गर्ने प्रयास गर्छ। युमेकोले आफ्नो सफल जुवा खेलबाट जितेको रकम उहाँलाई दान नगरेसम्म उहाँ घरपालुवा जनावर बस्नुहुन्छ। Ryota रोमाञ्चित छिन् र खुशीसाथ उनको इशाराको लागि धन्यवाद दिन्छिन्, पछि यसलाई फिर्ता गर्ने वाचा गर्दै। रयोटा सिजन १ मा देखा पर्दा, उनी सम्भवतः काकेगुरुई सिजन ३ मा युमेको र साओटोमसँगै देखिनेछन्।
बाट पात्रहरू केकगुरुई धेरै राम्रो लेखिएका छन् र श्रृंखला मा सबै धेरै मनपर्ने छन्। त्यहाँ धेरै अन्य क्यारेक्टरहरू पनि थिए जुन सब क्यारेक्टर हुन् जसलाई तपाईंले MC को विचार गर्न सक्नुहुन्छ। सूचीबद्ध गर्न यी मध्ये धेरै थिए र त्यसैले तिनीहरू माथि समावेश गरिएका छैनन्। तिनीहरू पनि धेरै मनपर्ने थिए र राम्रो लेखिएका थिए।
काकेगुरुईको अन्त्य + किन यो महत्त्वपूर्ण छ
किन को एक सीजन3बुझ्नको लागि केकगुरुई सम्भव छ र सम्भव छ, हामीले अन्त्यमा हेर्नु पर्छ केकगुरुई सिजन २. एनिमीको अन्त्य एकदमै अनियमित थियो, पहिले आएको कुनै पनि आर्क्सको वास्तविक निर्णायक अन्त्य बिना। अन्तिम एपिसोडका धेरैजसो पात्रहरूले त्यही निष्कर्षमा पुग्छन् युमेको हो “पागल, उनी पूर्ण झुकाव ब्याट बकवास पागल छिन्", जसरी उनको पास प्रकट हुन्छ र उनको आमाको भयानक पीडा पनि देखाइएको छ। अन्त्य खास त्यो भव्य वा मनोरन्जनात्मक छैन। यसको सट्टा, यो सबै राउन्ड अप गरिएको छ ताकि अधिकांश मुख्य पात्रहरूले उनीहरूले चाहेको कुरा प्राप्त गर्छन्।
युमेको काकेगुरुई सिजन ३
सीजन3साँच्चै कस्तो देखिन्छ। धेरै जसो क्यारेक्टरहरू समावेश हुनेछन्, यद्यपि त्यहाँ केही अनुपस्थितिहरू हुनेछन् सायाका इगाराशी। पछिल्लो एपिसोड मध्ये एक मा, सयाका एक खेलमा बाध्य छ जहाँ उनी हारे भने, राष्ट्रपतिले उनीसँग सबै अन्तरक्रियाहरू बन्द गर्नुपर्नेछ, र यसको विपरित। केकगुरुई सिजन ३ ले दोस्रो सिजनको अनौठो अन्त्यको वरपरका शंकाहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ।
त्यहाँ सिजन3हुनेछ?
ध्यान दिनुपर्ने ठूलो कुरा केकगुरुई यो को एक हिस्सा हो Netflix Originals कार्यक्रम। यो धेरै कारणहरूको लागि राम्रो छ, सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण तल उल्लिखित गरिनेछ:
नेटफ्लिक्स ओरिजिनलहरू सोहरू हुन् जसलाई पुन: गरिएको हो Netflix, द्वारा मात्र क्रेटेड छन् Netflix, वा द्वारा वित्त पोषित Netflix.
केकगुरुई पहिलो सिजन प्रसारण भएको २ वर्षपछि मात्र दोस्रो सिजन प्राप्त भयो, प्रशंसकहरूले पहिले नै बढ्दो समर्थन देखाउँदै।
मंगा को लागी केकगुरुई द्वारा प्रकाशित वर्ग Enix 2014 मा रोकिने कुनै संकेत बिना अझै जारी छ।
Kaguya Sama जस्तै एनिमे! aa सिजन3को लागि पहिले नै तिनीहरूको नवीकरण भइसकेको छ, यद्यपि दुई एनिमे समान छैनन्, तिनीहरू दुवैको वरिपरि उस्तै मात्रामा प्रचार छ।
Netflix प्रशंसकहरूको चाहना र यसले ल्याउने सम्भावित राजस्वको कारणले नयाँ शृंखला कमिसन गर्ने सम्भावना छ।
मेरी साओटोम काकेगुरुई सिजन ३
त्यहाँ धेरै अन्य कारणहरू छन् जुन म यो पोस्ट छोटो राख्नको लागि जाने छैन, यद्यपि ती सबैले मेरो निष्कर्षमा योगदान पुर्‍याउँछन्। केकगुरुई सिजन 3. हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि ए केकगुरुई यसका कारण सिजन ३ हुने सम्भावना छ । तपाइँ सचेत हुनुपर्दछ कि एनिम उद्योग धेरै अप्रत्याशित छ, यद्यपि जब Netflix समावेश छ यो सामान्यतया बताउन अलि सजिलो छ।
काकेगुरुई सिजन ३ कहिले रिलिज हुन्छ?
हाल, सिजन ३ को बारेमा कुनै आधिकारिक घोषणा गरिएको छैन केकगुरुई, शो को निर्माता र निर्देशक मार्फत, वा मार्फत Netflix। यद्यपि, CV को रिलीज अनुमान छ केकगुरुई सिजन3लगभग 2022 मा आउनेछ। हामीलाई सही मिति थाहा छैन र यसको अनुमान गर्न सक्दैनौं। यद्यपि, हामी दृढताका साथ सुझाव दिन्छौं कि यो कम्तिमा २०२२ मा रिलीज हुनेछ।
एनिमीको अन्तिम एपिसोड रिलिज भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि एनिमेस बीच तेस्रो सिजनको लागि पर्याप्त समय भएको छ। त्यसैले तपाईंले अपेक्षा गर्नुपर्छ केकगुरुई २०२२ को मध्यतिर सिजन ३।
म Kakekgurui सिजन3कहाँ हेर्न सक्छु?
तपाइँ पक्कै हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ केकगुरुई सजिलैसँग, Netflix स्पष्ट विकल्प भएकोले। देखि Netflix पहिलो र दोस्रो सिजन कमिसन गर्ने लगभग निश्चित छ केकगुरुई सिजन ३ मा रिलिज हुनेछ Netflix। तपाईं यसलाई स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ Netflix यदि तपाईं बेलायत र अमेरिका, साथै केही अन्य युरोपेली देशहरूबाट हुनुहुन्छ भने।
पैसा संग Yumeko Kakegurui सिजन 3
हामीलाई अन्य देशहरूको बारेमा थाहा छैन र हामीले जान्नेहरूको लागि मात्र बोल्न सक्छौं। तपाइँ जहिले पनि तपाइँको VPN लाई तपाइँको स्थानमा आधारित तपाइँको हेर्ने क्षमताहरु सजिलै परिवर्तन गर्न को लागी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यो लेख पढ्नु भएकोमा धन्यवाद। हामी तपाईंलाई अर्को पोस्टमा भेट्ने आशा गर्छौं र हामी निश्चित रूपमा आशा गर्छौं कि हामीले देख्नेछौं केकगुरुई साथै। तपाईको दिन शुभ रहोस् र सुरक्षित रहनुहोस्।
Cradle View Merchandise खरिद गरेर Cradle View लाई समर्थन गर्न मद्दत गर्नुहोस्
Cradle View को लागि साइट लेखकहरूलाई समर्थन गर्न मद्दत गर्न कृपया Cradle View व्यापारिक सामानहरू खरिद गर्ने विचार गर्नुहोस्। सबै डिजाइनहरू मौलिक सीमित संस्करण डिजाइनहरू हुन्, जुन भावुक कलाकारहरू र सिर्जनाकर्ताहरूद्वारा बनाइएका हुन् जुन तपाईंले Cradle View वा हाम्रो सिस्टर साइटमा मात्र पाउन सक्नुहुन्छ। cradleviewstore.com
CVS रातो समुराई ब्याकप्याक
CVS रेड समुराई कट र टंक शीर्ष सिलाई
CVS रेड समुराई महिला टी-शर्ट
पुरुषको CVS हान्न्या लाँग स्लीभ शर्ट
सीवीएस साँझ दानव हूडी
समान सामग्री पढ्नुहोस्
नेटफ्लिक्स [सम्मिलित क्लिपहरूको साथ] हेर्न शीर्ष १० स्प्यानिश डब एनिमे
दानव स्लेयर - कहाँ बेस्ट मर्च किन्नुहोस्
टैग: kakegurui kakegurui anime kakegurui anime netflix kakegurui अंग्रेजी डब kakegurui नयाँ सिजन kakegurui नयाँ सिजन रिलीज मिति काकेगुरुई सिजन ३ kakegurui सिजन3रिलीज मिति नेटफ्लिक्स काकेगुरुई एनिमे
अघिल्लो प्रविष्टि Kuzu No Honkai मा आदर्श एनिम जोडी
अर्को प्रविष्टि पढ्नुहोस् Komi कन्ट कम्युनिकेट भोल्युम १